जलविद्युतका लागि मौद्रिक नीतिबाटै ‘फ्ल्याट’मा ब्याज घटाउनुपर्छ - UrjaKhabar जलविद्युतका लागि मौद्रिक नीतिबाटै ‘फ्ल्याट’मा ब्याज घटाउनुपर्छ - UrjaKhabar
जलविद्युतका लागि मौद्रिक नीतिबाटै ‘फ्ल्याट’मा ब्याज घटाउनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा समट्छ नै होला । हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिँदा राम्रै होला । जलविद्युत् र नियायक निकायको नीतिको कनेक्सन ३ वटा रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
एउटा, जलविद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विषय । दोस्रो, जलविद्युत् विकासलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी सहजीकरण गर्ने । तेस्रो, लगानीको कुरा आउँछ । यी ३ कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रत्यक्ष असरको विषय हेरौं ।
अहिले देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषय पनि यसैमा आयो । सबै आयोजनामा कोभिड–१९ को असर परेको छ । यसले जलविद्युत्को काम रोकिन पुगेको छ । तर, बैंकको ब्याज बढिरहेको छ । दिन त सरकारले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिएको छ । यो जलविद्युत्को हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यो २ प्रतिशत छुटले पुग्छ/पुग्दैन । साउनदेखि उता लागु हुन्छ/हुँदैन । कहिलेसम्म लागु हुन्छ ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । राष्ट्र बैंकले आउने मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असर सम्बोधन गर्दा ब्याजदर हेरिदिनुपर्छ । प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माण गर्न लिएको बैंकको ऋणको ‘पे ब्याक’ समय बढाइदिनुपर्छ ।
ब्याजदर पुनर्मूल्याङ्क गर्न सकिन्छ । ब्याज छुट दिँदा कहाँ, कसलाई असर गर्छ त ? कुनै पक्षलाई त यसको प्रत्यक्ष असर अवश्य पर्छ । ब्याज घटाउँदा पनि कि त यसको भार ऋणदाता बैंकले लिनुपर्यो । कि निक्षेपकर्ताले लिनुपर्यो । कसैले नबेहोर्दा बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा होल्ड गरिराख्ने तर ब्याज घटाउने गर्दा पुँजी परिचालनमा समस्या हुन्छ ।
त्यसकारण, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंकहरूको ब्याज ‘फ्ल्याट’ मा घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । अर्कोकुरा, ऋण तिर्ने समयावधि पनि थप गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले यी विषयलाई समेट्छ होला ।
सञ्चालनमा रहेका ३५ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भन्ने कुरा आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि यो कुरा स्वीकारेको छ । यी आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा दिनुपर्ने विषय उठेको छ । यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ । यसका लागि सहायता कोष खडा गर्न सकिन्छ वा पुनर्कर्जा दिनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।
आयोजना कसरी रुग्ण भए भन्ने पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यी आयोजना साना र बढी लगानीका छन् । साना आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढेर ३५ करोडसम्म पुगिसक्यो । त्यसमा पनि जडित क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा हर्जना तिर्नुपर्ने कारणले यी आयोजना रुग्ण भए ।
मौद्रिक नीतिमा ‘भ्यालु इन्जिनियरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने विषय आउनुपर्छ । यसो भए ऊर्जा क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक र नाफामुखी हुनसक्छ ।
भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिन ‘भ्यालु इन्जिनियरिङ’ को प्रणाली लागू हुनुपर्यो । अब ऊर्जामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो प्रणालीबाट लगानी गर्न उचित भए/नभएको हेनुपर्छ । यो नहेरी लगानी गर्दा लागतमात्र बढ्ने र रुग्ण बन्ने सिलसिला चलिरहन्छ । यसैले, मौद्रिक नीतिमा ‘भ्यालु इन्जिनियरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने विषय आउनुपर्छ । यसो भए ऊर्जा क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक र नाफामुखी हुनसक्छ ।
अर्को उठाउनै पर्ने विषय, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका लाखौं जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव भएकाले यो जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । सानो कामका लागि विदेशी कामदारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्र्दै नेपाली जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
यसले देशको पुँजीलाई देशभित्रै परिचालन गर्न मद्दत गर्छ । यसबारे पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गनुपर्छ । नेपाली जनशक्ति नै दक्ष भए आयोजनाको लागत घट्छ र देशलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्युत् बजार हो ।
१५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । देशभित्रै खपत हुन नसक्ने हुँदा यसलाई कहाँ बिक्री गर्ने त ? अस्ति, अर्थमन्त्रीज्यूले विद्युतीय गाडीले विद्युत खपत बढाउँदैनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन तथा विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्छ । यस्तै हो भने त विद्युत् बिक्री गर्ने बजार खै त ?
अब विद्युत् खपत बढाउने कुराको सम्बोधन नीतिगत रूपमै गरिनुपर्छ । सबै उद्योगमा गुणस्तरीय विद्युत् दिने, विद्युतीकरण बढाउने, ग्यास प्रतिस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आर्थिक नीतिले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइदियो । मौद्रिक नीतिले खरिद मूल्य सस्तो बनाइदिन सक्छ । यसो गर्न सके थोरै भए पनि राहत पुग्छ । अर्को, महत्त्वपूर्ण विषय हेजिङ फन्ड र क्रेडिट रेटिङको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ फन्ड र क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वभर पुँजीको माग हुने हुँदा विदेशी लगानी ल्याउने नीति सहज बनाउनुपर्छ ।
सजिलै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मौद्रिक नीतिले मात्रै नसक्ने हुँदा अर्थ नीतिमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । लगानी गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सहज बनाइदिनुपर्छ । प्रतिफल लैजान नपाए लगानी गर्न कोही आउँदैन ? अतः कोभिड–१९ सकिएपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि नै योजना बनाउनुपर्छ । अहिले बनाएको योजनाले नै महामारीपछि लगानी आउने हो ।
कूल लगानीको १५ प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्न बैंकलाई दबाव दिन सकिँदैन । तर, विद्युत खपत् बढ्दै गए भविष्यमा यसो हुन सक्ला । तत्काललाई सम्भावना देखिँदैन । बरु पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउने नीति लिनुपर्छ । खपत बढाउन विद्युतीय उपकरण उपयोग बढाउन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । खपत बढ्यो र लगानी सुरक्षित देखेपछि बैंक लगानी गर्न गइहाल्छन् ।
जलविद्युत् विकासमा धेरै समस्या छन् । सबै समस्याको समाधान मन्त्रीपरिषद् हुन सक्दैन । आर्थिक नीतिबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ । एकद्वार नीति पनि आवश्यक छ । नियामक निकायको नीतिले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न अलि सम्भव हुँदैन ।